अहिलेसम्म कै डरलाग्दो सीसीटीभि फुटेज बाहिरियो, एक बच्चिलाई पाँच कुकुरले जे गरे त्यो देखेर सबैको होस् उडयो ! – List Khabar
Home / रोचक / अहिलेसम्म कै डरलाग्दो सीसीटीभि फुटेज बाहिरियो, एक बच्चिलाई पाँच कुकुरले जे गरे त्यो देखेर सबैको होस् उडयो !
admin January 16, 2022 रोचक Leaveacomment 137 Views
त्यसपछि एउटा कुकुरले बालिकाको हात, मुखमा समातेर ढाल्यो । त्यसपछि सबै कुकुरहरू उसलाई एकसाथ खान थाल्छन् । त्यसपछि त्यहाँबाट गइरहेका एक युवकले ढु’ङ्गा’ले हा’ने’र कुकुरहरूलाई भ’गाए । बालिकालाई गम्भीर चो ट लागेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जानकारी दिएका छन् । उनलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । घटना भोपालको बाग सेवानिया क्षेत्रको हो ।
एक मजदुरकी छोरी आफ्नो घर बाहिर खेल्दै गर्दा कुकुरको एक समूहले उनलाई सिकार बनाएको बताइएको छ । जब उनी भाग्न खोज्दै थिइन्, कुकुरहरूले उनलाई घेरेर टो केका हुन् । भोपालको बाग सेवानिया क्षेत्रबाट सार्वजनिक भएको भिडियोमा कुकुरले उनलाई भुइँमा ढालेर टो क्दै गरेको देख्न सकिन्छ ।
यो पनि, यसरी घटाउन सकिन्छ तौल
सक्रिय जीवन अपनाउनु: सधैं सक्रिय जीवनयापन गर्नुपर्छ। यसकोलागि विविध प्रकारका शारीरिक क्रियाकलाप र व्यायाम हुन जरुरी छ। सन्तुलित भोजन खानु: मोटो भयो भन्दैमा खाना खानै छोड्नु बानी गर्नुहुँदैन। विशेषगरी,दैनिक तीन पटक सन्तुलित खाना खानुपर्दछ। हरेक खाद्य समुहबाट आवश्यक परिणाममा पोषिलो खाद्यपदार्थ छनोट गर्नुपर्छ।
क्यालोरी कम गर्नुपर्छ : बढी प्रोटिन,चिल्ले र कार्बोहाइड्रेट भएको खाद्यपर्दाथ क्यालोरी बढाउने भएकाले साधारणभन्दा कम क्यालोरी दिने भोजन छनोट गर्नुपर्छ। स्वस्थकर चिल्लोको प्रयोग गर्नुपर्छ : शरीर स्वस्थ राख्न केही चिल्लो पदार्थको आवश्यक पर्ने हुनाले सकेसम्म वनस्पति स्रोतबाट प्राप्त अतृप्त फ्याटी एसिड भएको खाद्य पदार्थ जस्तै ः दाल, गेडागुडी, भटमास आदि प्रयोग गर्नुपर्छ।
खाजा भोक लाग्दा मात्र खानुपर्छ : मुख्य खानाबाहेक बीचबीचमा खाइने खानाले पनि तौल बढाउन मदत गर्छ। एक त यसप्रकारको खाजा बढी चिल्लो हुने हुने, अर्को कुरा पटकपटक खाँदा अनावश्यक भन्दा बढी सक्छ। प्रशस्त पानी पिउनुपर्छ : स्वस्थ रहन दिनमा प्रशस्त पानी पिउनुपर्छ। यसबाहेक खाना खानु आधा घण्टा अगाडि पानी पिउँदा खानाको परिणाम कम गर्न मदत गर्छ।
बेलुकाको खानामा स्न्याक्स खाना रोज्नुपर्छ : बेलुकीको खाना खाइसकेपछि पनि केही खाजा खाइन्छ भने त्यस्तो बानीलाई हटाउनुपर्छ। यदि साँच्चै भोक लागेको छ भने यस्तो स्थितिमा केही फलफूल,कम चिल्लो भएको दूध खान सकिन्छ।